Ogaden News Agency (ONA) – HOGAANKA ARIMAHA DIBADA EE JWXO OO SHIR KUQABTAY SAN DIEGO, CA
HOGAANKA ARIMAHA DIBADA EE JWXO OO SHIR KUQABTAY SAN DIEGO, CA
waxaa maanta si rasmi ah ufarmey shir ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Ogadenia ee ku dhaqan magaalada San Diego ee cariga maraykanka. waxaa lagu soo dhaweeyay oo shirkaas madax sare oo kasocdo JWXO. waxaa halkaa khudbad dheer oo aad loola dhacay kajeediyay hogaanka arimaha dibada ee JWXO Mudane Abdirahmaan Sheikh Mahdi, oo uga digay dadweynaha somaliyeed iyo dhamaan dadka kuhadla afka Somaliyeed inay ogaadeen inay Ethiopia cadow kutahay Somali oo dhan markastana ay shirqool uqoosho dadka Somaliyeed oo ay tahay in laga digtoonaado.
Madaxa arimaha dibada ee JWXO Mudane Abdirahmaan Sheikh Mahdi ayaa soo bandhigay warbixino maqal iyo muuqaal ah oo ay kamid ahaayeen waraysiyo lagasoo qaaday dad ay ciidamada Ethiopia dhibaataayeen oo dadkii halkaa isugu imaaday kawada oohiyay. taasoo kaliftay dadka inay qaar banaanka ula baxaan oohintooda. Mudane Abdirahman ayaa daawashadii murugada lahayd kadib, kahadlay ama kawarbixiyay xaalada siyaasadeed ee uu maanta marayo halganku iyo intii uusoo maray iyo xadgudubka lagu hayo dadka Somalida Ogadenia.
Mudane Abdirahman waxaa safarkiisa kuweheliyay Mudana Ahmed Majeerteen oo ah madaxa jaaliyaadka JWXO ee qaybta galbeedka qaarada america oo isaguna meeshaas wacdaro kajeediyey aadna loola riyaaqay warbixintii iyo wacyi galinta oo soo jeediyay.
shirkaan oo aan loo kala hadhin ayaa madexdii kale iyaguna goob jooga ahaa ee khudbadaha kajeedayey waxaa kamid ah xidhiidhiyahay jaaliyaadka JWXO qaybta bariga mareykanka mudane Ahmed Ali Yusuf, waxaa kaloo halkaa ka hadley fanaanka Caanka ah ee re California Abdi-karin Karwal oo taageero culus kamuujiyay halkaa isagoo sheegay Ethiopia inay cadow utahay Somali oo dhan laakin dad aqoonsan ay yar yihiin loona baahan yahay in lawada ogaado cadownimada ay inoo hayso Ethiopia.
lasoco shirkaan warbixintiisa qaybta labaad